buddhism Archives - Page5of6- Thutazone
ရေးသားသူ - ကောင်းစည်သူ (သုတစွယ်စုံ) ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီး၌ ပြည်သူများ အဓိက ယုံကြည်ကိုးကွယ်ကြသည့် ဘာသာတရားများတွင် ဗုဒ္ဓဘာသာသည် တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်သည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုင်ရာ အတွေးအခေါ် အယူအဆများသည် ခရစ်တော်မပေါ်မီ ငါးရာစုက အိန္ဒိယနိုင်ငံ အရှေ့မြောက်ပိုင်းတွင် စတင်ထွန်းကားခဲ့သည်။ ဂေါတမမြတ်စွာဘုရား၏ ...
ရာဇဂြိုဟ်ပြည် သည် အိန္ဒိယနိုင်ငံ ဗီဟာပြည်နယ်၊ နာလန္ဒာခရိုင်တွင် တည်ရှိသည်။ ရာဇဂြိုဟ်သည် ရှေးယခင်က မဇ္ဈိမတိုက်၌ ပါဝင်သော တိုင်းကြီး ၁၆ တိုင်းအနက် မာဂဓတိုင်း၏ ပထမဆုံး မြို့တော်ဖြစ်သည်။ စတင်တည်ထောင်သည့်နှစ်ကို မသိရသော်လည်း ဘီစီ ၁၀၀၀ ...
မဟာဝင်၊ အာဒိကပ္ပကမ္ဘာဦးကျမ်းအစရှိသော မြန်မာကျမ်းဂန်များအရ၊ ကျွန်ုပ်တို့နေထိုင်ရာ ကမ္ဘာလောက သည် ဇမ္ဗူဒိပ်ကျွန်းဖြစ်သည်။ ဇဗ္ဗူဒိပ်ကျွန်းသည် မြင့်မိုရ်တောင် ၏ တောင်ဘက် မျက်နှာတွင်ရှိသော ကျွန်းကြီးဖြစ်သည်။ ပါဠိ ဘာသာအားဖြင့် ဇဗ္ဗူဒိပ်ကျွန်းဟု ခေါ်သည်။ ယင်းကို မြန်မာမှု ပြုသော် ...
Post By လင်းအိမ်တော် နတ်ဟူသည် မြန်မာစကား“နာထ”ဟူသော ပါဠိမှ ဆင်းသက်လာသည် ဟု ဝေါဟာရလိနတ္တဒီပနီကျမ်းက ဖွင့်ဆိုထားသည်။ နာထ၏ အနက်အဓိပ္ပါယ်မှာ ကိုးကွယ်ရာဖြစ်သည်။ လောကီ၊ လောကုတ္တရာအကျိုးတို့အတွက် လူသားတို့ကိုးကွယ်ရာဖြစ်သောကြောင့် “နာထ”၊“နာတ်”၊“နတ်”ဟု ခေါ်ဆိုနေကြသည်။ နတ်ကို ပါဠိဘာသာအားဖြင့် ...
ငရဲကိုပါဠိဝေါဟာရအားဖြင့် နိရယ ဟုခေါ်သည်။ နိ+အယ၊ နိ-မရှိသောကင်းသော+အယ-ချမ်းသာ။ ထိုနိရာယဟူသည့် ပါဠိကို မြန်မာအသံ သို့ပြောင်းသည့်အခါ နိရာယ်=နိရဲဟုဖြစ်လာသည်။ နိရဲမှ နရဲဖြစ်လာပြီးနောက်တွင် နငယ်ကိုအက္ခရာဖြင့် အသံဖလှယ်လိုက်သည့်အခါ နရဲမှငရဲဖြစ်လာတော့သည်။ထို့ကြောင့်နိရယမှအဆင့်ဆင့်ပြောင်းလဲလာသော ငရဲဆိုသည့်အဓိပ္ပာယ်ကား ချမ်းသာကင်းသော ဘုံဘဝဟု ဆိုလိုရင်းဖြစ်သည်။ ထိုငရဲဘုံတွင် ...
Written By Venerable Ghosaka ၁) 'ဟေ ! ဇောတိက ... မင်းတပည့်တွေနဲ့ ငါကို စစ်ထိုးခိုင်းပြီး မင်းက ဘုရားကျောင်းမှာ ရှောင်တိမ်းနေတာပေါ့ ဟုတ်လား' 'မင်းကြီး ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ ကျနော်မျိုးနားမလည်ပါ' 'မင့် ...